လူ့ဘ၀ ရေနွေးအိုး ~ အလွမ်းခရီးသည်
Tuesday, December 11, 2012 ဆောင်းပါး No comments
လူကတစ်ဆင့် ၊ လူဖြစ်လာတယ် ၊ လူကနေ လူကို လိမ်တယ် ၊ လူကနေ လူကို ပြုစားနိုင် ၊
အမှန်တော့ . . . စုန်းတွေ နတ်တွေ လက်နက်တွေ ၊ ချစ်သည် မုန်းသည် ၊ ရန်သူမည်တွင်
ဖြစ်ပေါ်လာသော ၊ အဆိုးတရား အကောင်းတရား အားလုံးဟာ ၊ လူတွေကိုယ်တိုင် ၊ ပြုလုပ်နေကြတာပါ
ကျွန်တော်လေ့လာနေမိတယ် ၊ အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ??” ။ ငွေရှိပြီး အချစ်မရှိရင် အိမ်ထောင်ရေးဟာ
သာယာနိုင်သလား?? ။ အချစ်ရှိပြီး ငွေရှိရင်ရော အိမ်ထောင်ရေးဟာ အဆင်ပြေနိုင်ပါသလား . . . .
တွေးလေ . . တွေးလေ . . . ဝေးပါပဲ ။ အချစ်အကြောင်းကို ဋီကာဖွင့် အနက်ပြန်ရရင် ၊ အရူးထောင်မှာ
သွားနေရတော့မည် ။ မတူညီစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စိတ်နှစ်ခု + ရုပ်အသွင် + လှုပ်ရှားမှု ၊ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့
အိမ်(ထောင်) (သို့) အိမ်(လှောင်)ရေး၊ ပြေလည်စွာ တည်ထောင်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ ။ အဖြေရှာကြည့်လိုက်ရင်
နားလည်မှုဆိုတဲ့ ၊ ကိုယ်ခြင်းစာ တရားကိုပဲ ၊ ကျွန်တော် တွေ့မိပါတယ် ။ လူတွေမှာ အချစ်ဆိုတဲ့ စကားလုံး
လူတိုင်းနှုတ်ဖျားမှာ ၊ ရေပန်းစားနေပေမယ့် ၊ စစ်မှန်တဲ့ နားလည်မှု မေတ္တာတရားကတော့ ၊ လူတိုင်းရဲ့
နှလုံးအိမ် စိတ်ထားမှာ ၊ ကိန်းအောင်းမနေတတ်ကြပါဘူး ၊ ဒါဟာ အမှန်တရားကို ရဲရဲကြီး ပြောတာပါ ။
အချစ်နဲ့ ၊ မေတ္တာ ဆိုတာ မတူညီကြပါဘူး ၊ အချစ်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲရှိပြီး ချစ်တတ်ကြတာပါ ၊ အမှတ်မထင်
တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်နေမိပီ ၊ အဲဒီလူဟာ သူချစ်နေသူတစ်ယောက်ကိုပဲ ၊ မေတ္တာ ပိုနေမိတယ် ၊
မေတ္တာတရားဆိုတာကျတော့ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမရှိဘူး ၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ၊ ဂုဏ်ရှိသူ ဂုဏ်မဲ့သူ ၊ ကျော်ကြားသူ
မကျော်ကြားသူ ၊ ရာထူး ဌာနန္တရ ရှိသူ မရှိသူ ၊ ဆိုတာ မေတ္တာတရားမှာ ၊ ဘက်လိုက်မှု မရှိပါဘူး ၊ ညီမျှတဲ့
စိတ်ထားရှိတာ မေတ္တာတရားပါပဲ ။ လူတွေအားလုံးဟာ ၊ ရုပ်ရည်လှပသူကို ၊ ပိုပြီး ချစ်ခင်တတ်ကြတာ
သဘာဝကျပေမယ့် ၊ မေတ္တာတရားကတော့ ၊ ရုပ်ဆိုး အကျည်းတန် ၊ ငါ့သား ငါ့မယား ငါ့ဆွေမျိုး ၊ တစိမ်း
တရံစာ ၊ အားလုံးကို တန်းတူ မျှဝေတတ်ပါတယ် ။ မေတ္တာတရားမှာ ဒေါသမရှိဘူး အမုန်း အာဃာတ
အညှိုးတရား မရှိပါဘူး ၊ ဒေါသ မရှိတဲ့ စိတ်ထား ကောင်းကျိုးကို လိုလားတဲ့ စိတ်ထား ၊ ညီမျှတဲ့ စိတ်ထား
ရှိတဲ့ အရာကို မေတ္တာလို့ ခေါ်တာပါ ။ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ၊ ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လို ထူထောင်ကြမလဲ
တွေးကြည့်တယ် ။ ငွေကြေး ဥစ္စာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နှင့် ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်ကြမလား ၊ သို့မဟုတ်
အချစ်တစ်ခုထဲနဲ့ ၊ တည်ဆောက်ကြမလား ၊ ငွေကြေး ဥစ္စာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နှင့် အတူ အချစ်ဆိုသော
အရာလေးနဲ့ တည်ဆောက်လိုက်ရင် ၊ ခိုင်မာ တည်မြဲနိုင်ပါ့မလား ။ စပ်စပ်ပြီး အတွေးထဲမှာ တည်ဆောက်
ကြည့်မိပါတယ် ၊ ကျွန်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အလုပ်သမား မိသားစုတွေကိုလည်း ၊ လေ့လာကြည့်မိပါတယ်
တစ်ချို့က ငွေမရှိနေပါစေ အေးအေးချမ်းချမ်း နေရဖို့ အချစ်တစ်ခုရှိရင် တော်ပါပီဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ၊ ဘ၀တွေ
တည်ဆောက်ကြတယ် ၊ ငွေကြေး ဥစ္စာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေချင်လို့ ၊ မချစ်ပေမယ့် ၊ ဘ၀တွေ တည်ဆောက်
ကြတယ် ၊ ရည်ရှည် လက်တွေ့ဘ၀မှာ ရိုးသွားတတ် ၊ အချစ် နဲ့ ငွေကြေးဥစ္စာ ဆိုတာ ၊ အစွဲတဏှာနဲ့
တပ်မက်နှစ်သက်တာ ဖြစ်နေပါတယ် ။ တဏှာဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိကြပါတယ် ၊ တဏှာရှိတဲ့ လူတွေ
အားလုံးဟာ အရူးတွေလို့ ပြောရင်မှားနိုင်မလား ၊ ဒါကြောင့် တဏှာ နဲ့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူတွေဟာ
အရူးတွေလို့ ပြောရင် မှားမယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး ၊ တစ်ကယ်တော့ ပျော်ရွှင်နွေးထွေးတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး
တစ်ခုကို တည်ဆောက်ချင်ရင် ၊ ငွေကြေးဥစ္စာ မလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ၊ စစ်မှန်တဲ့ နားလည်မှုရှိတဲ့ မေတ္တာ
တရားဟာ ၊ အဓိက နေရာမှာ ရှိပါတယ် ၊ စစ်မှန်တဲ့ နားလည်မှု မေတ္တာတရားဟာ ၊ ပြည့်စုံတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်
တစ်ခုလိုပါပဲ ၊ မတူညီတဲ့ လူနှစ်ယောက် ၊ ပေါင်းစပ် အတူနေဖို့ ၊ ဒေါင်းလွတ်ဆွဲကြတယ် ၊ ရလာတဲ့အခါ
ဖိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့ ၊ Name: MyEgy.com ပါပြီးတော့ ၊ အထဲမှာ key မပါတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ အသုံးပြုလို့
မရသလိုပါပဲ ၊ အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ ဒေါင်းလွတ်ဆွဲတဲ့နေရာမှလည်း ၊ အချစ်ဆိုတဲ့ Name:
MyEgy.com တစ်ခုထဲ ပါလို့ ဘာမှ သုံးလို့ ရမည်မထင်ပါဘူး ၊ ကျွန်တော် အပေါ်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ မေတ္တာ
သဘောတရား အစစ်အမှန်နဲ့တူတဲ့ ၊ key ပါဖို့လိုပါတယ် ၊ ငွေကြေးဥစ္စာဆိုတာ ရှာလို့ ရပါတယ် ၊ ကိုယ်စွမ်း
ဖို့တော့ လိုပါတယ် ၊ ဒီအတွက် ကြိုးစားထားရမယ် ၊ မေတ္တာဆိုတာက အလွန်တရာ အေးချမ်းတော့ ၊
ယူတဲ့သူကလည်း အေးချမ်းနေဖို့ လိုပါတယ် ၊ လူဖြစ်လာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀တွေဟာ ၊ ရေနွေးခရား
ထဲက ရေလိုပါပဲ ၊ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အရွယ်မှာ မတည်သေးတဲ့ ရေနွေးအိုးထဲက ရေအေးပါပဲ ၊ အရွယ်ရောက်
အတောင်ပေါက်လာတဲ့အခါ ၊ အသုံးပြုဖို့ ဖိုခွင်တင်လိုက်တဲ့ ၊ ရေနွေးအိုး တစ်လုံး ဖြစ်ကြရပေါ့ ၊ အိုးတွင်းမှာ
အေးနေတဲ့ ရေအေးတွေဟာ ၊ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေပူတွေ ဖြစ်သွားသလို ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးအိမ်
စိတ်အတွင်းမှာ ၊ လောဘ ဒေါသ မောဟ အတ္တ မာန်မာန အချစ်အမုန်း အရှုံး အနိုင် တွေ ၊ အားလုံးဟာ
အရွယ်နဲ့ အတူ ၊ ပွက်ပွက်ဆူကြပေါ့ ၊ အိုးထဲက ရေပူငွေ့တွေ အပြင်ကန်ထွက်လာသလို ၊ လူတွေရဲ့
သောက အပူလိုင်းတွေဟာလည်း ၊ သမိုင်းတွင်တဲ့အထိ ပျက်ဆီးလာတတ်ကြတယ် ၊ ရေဆိုတာ လူလိုပါပဲ
အရာရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ် ။ အေးနေတဲ့ ရေကို ပူအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ အသုံးပြုဖို့အတွက် ၊ ပူကြ
ရတာပါ ၊ ဒါပေမယ့် ၊ ကိုယ်လိုတာ အသုံးပြုပြီးပြီဆိုရင်တော့ ။ လက်ကျန် ရေဟာ ရေကျက်အေး ဖြစ်နေ
မှာပါ ၊ ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေ တည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ ၊ အေးရာကနေ ပူ ၊ ပူရာကနေ ၊ ကျက် ၊
ရင့်ကျက်မှု အတွေးလေးတွေနဲ့ ၊ မိမိဘ၀တွေကို ကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေဗျာ. . . .။
အမုန်းတရားကင်းမဲ့စွာဖြင့် နားလည်ဖတ်ရှု့နိုင်ကြပါစေ . . . . .
ကိုရင်မောင် . . . ၁၇ . ၄ . ၂၀၁၁..။